समाचार Archives - Samasta Khabar
आज हावाहुरी सहित ठूलो वर्षा हुने सम्भावना
15th May 2019 15th May 2019 avigo
आज देशभरि आंशिक देखि सामान्य बदलीको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो केहि स्थानहरुमा मेघ गर्जन, हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ। उच्च हिमाली भूभागहरुमा हल्का देखि मध्यम हिमपातको संभावना छ । त्यस्तै, राति देशभरि आंशिक देखि सामान्य बदलि रही देशका थोरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन, हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।उच्च हिमाली भूभागहरुमा हल्का देखि मध्यम हिमपातको संभावना छ । जेष्ठ ०२ गते (बिहिबार) दिउँसो देशभरि आंशिक देखि सामान्य बदलि रही पश्चिम र मध्य पहाडीका थोरै स्थानहरुमा र पूर्वका केहि स्थानहरुमा मेघ गर्जन…
काठमाडौँमा अँध्यारो, चट्यांग, बर्षात अनुकुल मिलाएरमात्र बाहिर निस्किनु
6th April 2019 6th April 2019 avigo
काठमाण्डौसहित देशभरिकै मौसम अहिले बदली भई केही ठाउँमा पानी परिरहेको छ । पश्चिमी वायु, पूर्वमा बनेको न्यूनचापीय क्षेत्र, बंगालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावा र स्थानीय वायुको प्रभावका कारण देशभरिकै मौसम बदली भई केही ठाउँमा पानी परेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाकी मौसमविद् मञ्जु बासीका अनुसार यो प्रणाली अहिले काठमाण्डौसहित मध्य क्षेत्रमा धेरै देखिएको छ । यसकै प्रभावले उपत्यकासहित देशका धेरै ठाउँमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरीसहित पानी पर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ । रातिपनि देशका विभिन्न भागमा वर्षा हुनुका साथै तराई क्षेत्रमा सामान्य हावाहुरीको सम्भावना रहेको…
बारामा विनाशकारी हावाहुरीको तथ्य
2nd April 2019 2nd April 2019 avigo
पोखरामा विकास भएको वायुसंग बङ्गालको खाडीबाट आएको वायु मिसिदा बारामा भिषण हावाहुरी चलेको काठमाडौँ जल तथा मौसम बिज्ञान बिभागले जनाएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छापिएको छ । विभागकाअनुसार दुवै दिशाबाट आएको हावा बारा आसपास क्षेत्रमा भेट हुँदा प्रतिघन्टा ९० किलोमिटरको गति लिएको थियो । प्रि–मनसुनमा मेघ गर्जनसहित हावाहुरी चल्ने गरे पनि बारा–पर्सामा चलेको हुरी अहिलेसम्मकै ठूलो भएको विभागले जनाएको छ । ‘अरेबियन सागरबाट पश्चिमी वायुसँग पोखरामा विकास भएको स्थानीय वायुसँग मिसिएर दक्षिण–पूर्वदिशाबाट चितवन हुँदै पर्सा–बारातिर चिसो हावा गयो । उता, बंगालको खाडीबाट उत्तर–पश्चिम हुँदै बारातिर तातो हावा आयो,’ मौसमविद्…
नेपाल टेलिकम : बिभिन्न डाटाप्याक योजना सार्वजनिक
नेपाल टेलिकमले विभिन्न डाटा प्याकमा छुट सहित नव योजना सार्वजनिक गरेको छ ।डाटाप्याक योजना अन्र्तगतको डे डाटा प्याक नामक योजनामा ३६ एमबि डाटा ६ रुपैयाँमा उपलब्ध गराएको छ। जसमा बिहान ६ बजे देखि बेलुका ६ बजे सम्मका डाटा चलाउन सकिने छ। डाटा प्याक अन्तर्गत कै विकेन्ड डाटा प्याक अफरमा १०० रुपैयाँमा ३ जिबी डाटा शुक्रबार, सनीबार र आइतबारका लागि दिइएको छ। यसमा एक दिनमा १ जिबी डाटा खर्च गर्न पाइने छ। त्यस्तै १८ रुपैयाँमा वान हावर अनलिमिटेड प्याक रहेको छ। यसमा १ घन्टा डाटाप्याकमा डे डाटा , भ्वाइस प्याक र…
एसईईमा लगातार प्रश्नपत्र बाहिरियो परीक्षा रद्ध
हालै चलिरहेको माध्यमिक तहको एसईई परिक्षामा शुक्रबारका दिन भएको सामाजिक परिक्षाको प्रश्नपत्र परिक्षा सुरु हुनु पूर्व नै बाहिरीएको खुलेको छ । सिराहामा शुक्रबारका दिन बिहान ८ बजे परीक्षा सुरु हुनु अगावै प्रश्नपत्र बाहिरिएको सिराहाका जिल्ला शिक्षा तथासमन्वय इकाइ प्रमुख डोलराज पाण्डेले जानकारी दिए । बिहिबार पनि विज्ञान विषयमा प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि रद्द भएको थियो । प्रदेश नम्बर २ मा परिक्षा हुनुपूर्व नै विज्ञान विषयको प्रश्नपत्र बाहिएपछि प्रदेश सरकारले छानबिन गठन गरेको छ ।
बेरोजगार फारम भर्नु की जापान जानू ? : गहन विषय
वर्तमान सरकारले बेरोजगार व्यक्तिहरुका लागि भनेर भत्ता दिने सुविधा बनाउँदै गरेको छ । त्यसै अनुरुप बेरोजगार व्यक्तिहरुले आफ्नो वडा कार्यालयमा बेरोजगार फारम भर्न सक्नेछन् । साथै जापान सरकारले नेपाली कामदार जापान लैजाने भनेपछि नेपाली यूवाहरुमा छुट्टै रौनक छाएको छ । जापान कसरी जाने ? कसरी जाने प्रक्रियामा अगाडी बढ्ने ? के सीप जानेको हुनुपर्दछ ? कति पैसा खर्च हुन्छ ? यस्तै यस्तै कुराले अहिले चोक चोकका चिया अड्डामा बहस भइरहेको छ । पढेलेखेकै यूवाहरु जो थोरै आम्दानी गर्छन्, उनीहरुमा यति पैसाले जीवन धान्न गाह्रो हुनाले लाग्नुपर्छ कि भन्ने सोचमा छन्…
प्रहरीको फेसबुक पेजमा अश्लील तस्बिर पोष्ट
26th March 2019 26th March 2019 avigo
जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाको नाममा रहेको फेसबुक पेजमा अश्लील तस्बिरहरु पोष्ट भएको पाइएको छ । पोष्टमात्र होइन प्रोफाइल पिक्चर साथै कभर फोटो समेत अश्लील तस्बिरले पोष्ट गरिएको भेटिएको हो । गोरखा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नाममा रहेको सो फेसबुक पेजमा भएको अश्लील तस्बिरले तनाब हुन थालेको प्रमुख एसपी भोला रावलले बताए । सो फेसबुक पेज अन्य कोही व्यक्तिले चलाएको हुनसक्ने रावलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उनीलाई विभिन्न स्थानबाट फोन आइरहेको छ । सो तस्बीरहरु हटाउन र पोष्ट गर्ने व्यक्ति पत्ता लगाउन आफूहरु निरन्तर प्रयास गरिरहेको उनले बताए । पेज कसले…
आज मौसममा बदली, छिटपुट वर्षा हुन सक्ने
25th March 2019 25th March 2019 avigo
आज देशका अधिकांश स्थानहरुमा आंशिक बदली रहेको जल तथा मौसम विज्ञान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो देशको पश्चिमी भागमा र अन्य पहाडी भागहरुमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रही केही बाँकी भूभागहरुमा आंशिक बदली रहनेछ । मेघ गर्जन सहित हल्का वर्षाको संभावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हिमाली भेगहरुका केही स्थानहरुमा हिमपातको संभावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो । आज जसरी भोलि मंगलबारका दिन दिउँसो देशका अधिकांश स्थानहरुमा आंशिक बदली रही मेघ गर्जन सहित हल्का वर्षाको संभावना साथै हिमाली उच्च भेगहरुमा हिमपात हुने महाशाखाले जनाएको छ । बुधबारका दिन…
एनालग प्रविधिमा टिभी चलाएको भन्दै सरकारको आपत्ति, सामान जफथ गर्ने चेतावनी
तत्काल डिजिटल प्रविधिमा जान पुन आग्रह गर्दै सरकारले अझै पनि एनालग प्रविधिमा टेलिभिजन चलाएको भन्दै यसको अवज्ञा गर्दैै टेलिभिजन चलाइरहे माल सामान जफथ गर्ने चेतावनी दिएको छ । आज सुचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले एक सूचना मार्फत यस्तो चेतावनी दिएको हो । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ ले काठमाडौं, विारटनगर, विरगन्ज , ललितपुर र पोखरा महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सबै एनालग केवल नेटवर्कहरु २०७४ वैशाख १५ गते सम्म र सो बाहेकका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका भित्रका क्षेत्रमा २०७४ कात्तिक १५ गतेसम्म डिजिटलमा जान निर्देशन दिइएको थियो । बाँकी रहेका सबै गाँउपालिका समेत…
केटीः आफ्नै साथीको फेक आईडी बनाएर केटालाई अश्लिल म्यासेज !
14th February 2019 avigo
यो घटना नेपालको हो । सुदूरपश्चिमको डोटीमा साइबर क्राइम गरेको आरोपमा एक किशोरी पक्राउ परेकी छिन् । आफनो साथीको फोटो प्रयोग गरेर नक्कली फेसबुक आईडी बनाइ अन्य पुरुषहरुसँग अश्लिल कुरा गर्ने ती किशोरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । आफूसँगै एउटै कक्षामा अध्ययन गरिरहेकी साथीको फोटो राखेर खोलिएको आईडीबाट आफूलाई यौन इच्छा लागेको भन्दै अश्लील सन्देश पठाउने गरेको प्रहरीले बताएको छ । पीडित छात्राले आफ्नो फोटो प्रयोग गरेर नक्कली आइडी बनाइ अश्लिल संदेश पठाएको भन्दै नेपाल प्रहरीको अपराध महाशाखा काठमाडौंमा मुद्धा दायर गरेकी थिइन् । पीडित किशोरीको निबेदनका आधारमा आरोपित किशोरीलाई…